Homeसमाचारआखिर को हुन् यी ब्याक्ति ? मेलम्चीमा दे’खिएका यी ब्याक्ति जसलाई भगवान भन्दै रुन थालेपछि…. (भिडियो)
June 20, 2021 admin समाचार 3961
चनौट बजारकी भीमकुमारी ज्योतिलाई साँझ प’यो कि ड’र लाग्न थाल्छ । साँझ परेपछि चनौट ब’जारमा भएर बग्ने मेलम्ची खोलामा पानी बढ््न थाल्छ अनि ढुङ्गाको आ’वाज आउन थाल्छ । मडा’रिएर कालो बादल आउन थालेपछि उहाँको मन आ’त्तिन्छ फेरि पनि खोला कति ठूलो हुने हो र के के क्षति पु-याउने भन्ने । “कालो मडारिएको बादल देखिएपछि ड’र लाग्न थाल्छ, फेरि पनि पानी पर्ने र खोला भरिने हो कि भनेर”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन दिन भयो, फेरि पनि खोला बढेर बगा’उँछ भनेर सुत्न पाएका छैनौँ ।”
यही असार २ गते मेलम्ची खोलामा बाढी आ’उँदा उहाँको घर र जग्गा सबै बाढीले ब’गाएको थियो । साँझ ७ः०० बजे खोलामा ठूलो आवाज आयो र घरबाहिर नि’स्केर हेर्दा ठूलो पानी आइरहेको उहाँले देख्नुभयो । त्यो खोला छिनभरिमा नै उर्लियो र राति १२ः०० बजे उहाँको घरजग्गा सबै बगायो । “त्यो दिन हामी घरबाट चाँडै निस्के’रमात्र बाँच्न पायाँै”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “खोलामा ठूला आवाज र जमीन थरथर काम्न थालेपछि हामी बाहिर के भयो भनेर बाहिर निस्के’का हौँ ।”
बाजे–बराजुको पालादेखि नै मेलम्चीमा यस्तो बाढी नआ’एको उहाँले बताउनुभयो । बा’ढीले बजार क्षेत्रका ५५ घरमध्ये २० घर बगाएको र करिब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्ष’ति भएको उनको भनाइ छ । सोही बजारमा हेलम्बु मोटरसाइकल वर्कसप सञ्चा’लन गर्दै आएका सन्देश तामाङले ग्राहकको चारवटा मोटरसा’इकलसहित पसलका सबै सामान बगा’एको बताए । उनी भन्छन्, “असार २ गते साँझ ७ बजेतिर खोलामा ठूलो आवाजसँगै करिब १० मिटरजति उचा’इको बाढी आयो । एकछिनमा नै पूरा बजार पानीले भ-यो । मानिसमा रुवा’बासी र भागा’भाग भयो ।
November 22, 2021 admin समाचार 1824
October 10, 2020 admin समाचार 9201
October 5, 2020 admin समाचार 9882